Sawirro dheeri ah oo ka mid ah 'Beats Studio Buds', ayaa bilaabanaya goor dhow | Waxaan ka socdaa mac
Masawirro dhowr ah oo ku saabsan dhagaha dhagaha ee loo yaqaan 'Beats Studio Buds headphones' ayaa si toos ah uga daatay internetka, kaas oo waxaad si faahfaahsan oo hufan u arki kartaa naqshadda sanduuqa iyo sameecadaha dhagaha laftooda. Dareenkan, daadinta waxay ka imaaneysaa NCC-da Taiwan (Xogta Guddiga Isgaarsiinta Qaranka) markaa waxaan cadeyneynaa in nashqadu ay tan noqon doonto.
Toddobaad ka hor, sawirrada halyeeyga NBA-da halyeeyga ah ayaa la dusiyay - Lebron James, iyada oo dhagaha lagu garaaco 'Beats' iyo sawirro cusub oo kuwan ka mid ah ayaa hadda ka muuqda goobta Buds Studio. Sameecadaha dhagaha ayaa xoogaa ka duwan kuwa AirPods waxayna ku daraan talooyin silikoon ah sida AirPods Pro.
Xaaladdan oo kale sawirada xitaa waxay ku darayaan taliye si loo arko cabirka dhagaha dhagaha, waxay u muuqataa in lagu daro isticmaal dekedda USB C ku shubida sanduuqa wax lagu keydiyo tan iyo markii fiilo ay kujiraan USB C labada dhinacba ay ka muuqdaan sawirada, tanina waa cibaado tan iyo markii moodelladii yaraa ee hore ay badanaa isticmaali jireen dekedda Hillaaca danab.
Waxaa macquul ah in dhagaha dhagaha cusub ee 'Beats' ay dhawaan ku dhici doonaan khaanadaha dukaamada waana in dhammaan shahaadooyinka la soo dhaafay iyo waxyaalaha sirta ah ee aan aragnay bilihii la soo dhaafay ay muujinayaan inay diyaar u yihiin inay bilaabaan suuq geyn. Waxay umuuqataa dhagaha dhagaha saxeexan ee laga helay dalladda Apple waa la sii deyn doonaa xitaa kahor AirPods 3 xanta toddobaadyo ka hor waxayna si lama filaan ah umuuqataa inaysan jirin wax war ah oo iyaga ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Sawirro badan oo ka mid ah 'Beats Studio Buds', ayaa bilaabanaya dhowaan